नोष्टाल्जिया एक मिठो प्रेम र अनुभूति हो – लारा [LARA] | साहित्य संसार
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुन १, २०६८
प्रकाशन मिति : सोमबार, फाल्गुन १, २०६८
नेपाली साहित्यमा योगदान पुर्याउदै आउनु भएका श्रष्टाहरुसँग भलाकुसारी गर्ने क्रममा यसपाली हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ – लारा राइ । पहिले हङकङ र हाल बेलायत वसोवास गर्दै आउनु भएकी लेखिका लाराले हालसालै – “पात्रहरु सँग एक साँझ” नामक कृति बजारमा ल्याउनु भएको छ । नेपालदेखि हङकङ, बेलायत या विशेषत प्रवास परिवेश समेटिएका कथाहरुको संकलन यो कृति सर्वाधिक लोकप्रिय भै दोश्रो संस्करणको तयारीमा रहेको छ । लारा राइले साहित्य सिर्जनाका अतिरिक्त सांस्कृतिक र सामाजिक कार्यमा पनि उत्तिकै अभिरुची र संलग्नता राख्दै आउनु भएको छ । अनेसास लगायतको साहित्यिक संस्था तथा अन्य विविध सामाजिक संस्था सँग आबद्ध भै कार्य गर्दै आउनु भएकी उनै श्रष्टा लारासँग साहित्यसंसारका कृष्णपक्षले गरेको छोटो भलाकुसारी यहाँ प्रस्तुत गर्दछौं ।
१ ‘लारा’ किन हुनु भयो ? लक्ष्मी राइ र लारामा के भिन्नता छ ?
‘लारा’ हुनु यसको कुनै कारण र अर्थ छैन । लक्ष्मी राइ र लारामा केही भिन्नता छैन । La (xmi) + Ra (i) = LaRa.
२ साहित्य सिर्जनामा कहिले देखि सक्रिय हुनुहुन्छ ? र कुन विधामा विशेष मोह छ तपाईंको ?
स्कूले जीवन देखि नै हो र, आख्यान लेखनमा मोह छ ।
३ लाराजी तपाइँ किन लेख्नु हुन्छ ? आफ्नो लेखन कर्म बाट कति सन्तुष्ट हुनु हुन्छ ?
आफ्नो आत्मसंतुष्टिको लागि लेख्छु। आफु ख़ुशी लेख्दा आफैंलाई राम्रो लागे पनि साहित्यिक जमातमा दर्बिलो नहोला ।वास्तवमा, संतुष्टिको मापदंड के हो?
४ यहाँको भर्खर प्रकाशित कथा संग्रह ‘पात्रहरु संग एक साँझ’ भित्रको मूल मर्म के हो ? यसभित्र के छ ?
परम्परागत लेखन भन्दा पृथक प्रस्तुति छन ।डायस्पोराबाट एउटी श्रमजीवीले श्रम—समय कटौती गर्दै लेखेको कृति ‘पात्रहरुसँग एकसाँझ’ यदि काल, परिस्थिति तथा स्थान अनुरुप सार्वभौम मान्यताभित्र मानवीय अलग सोच र संवेदनाहरु पनि स्विकार्य हुन्छन् भने बस्तुतः त्यहि प्रयास हो यो कथा—कृति ।
५ यो कृतिको विमोचन बेलायतमा नगरेर हंगकंगमा गर्नु भयो नि किन ? यसभित्र त्यसक्षेत्र र परिवेशका कथाहरु धेरै छन हो ?
जीवनका उर्बर समय हंगकंगमा बिताएको हुनाले केही भावनात्मक सम्बन्ध र साथी-संगीहरु पनि उतै भएको कारणले पनि हो बिमोचन हंगकंगमा गरिएको हो। हंगकंग तथा बेलायतका सामान परिबेशहरु छन कथा भित्र ।
६ प्रवासमा नेपाली साहित्यको स्थिति के छ ? उहाँहरुमा साहित्यप्रतिको अभिरुची कस्तो पाउनु भएको छ ?
प्रवासमा जो बस्छन्— उनीहरुका लागि नोष्टाल्जिय एक मिठो प्रेम र अनुभूति हो । लाग्छ, जीवन आफैंमा एक “नोष्टाल्जिया” हो । नोष्टाल्जियाका त्यहि अनुभूतिहरु यसरी बल्झिन्छन् त कस्को के लाग्छ ? त्यसैले, प्रबासमा बस्नेहरु नोस्टाल्जिया बाहेक जीवनका यावत भोगाइका तथा अनुभवका कारणले पनि प्रबासमा नेपाली साहित्यिकप्रति अभिरुचि राखिन्छ। त्यसो त प्रबिधिको बिकास संगै मान्छेका रूचि तथा जीवन चर्यामा ब्यापक परिबर्तन आएको छ तैपनि, नेपाली साहित्य जांगारिलो नै छ । धेरै नयाँ किर्तिहरू प्रकाशनमा आउनु मात्रै उपलब्धि हैन तर बिधुतीय संजालले पनि उतिकै बिस्तार गर्दैछ नेपाली साहित्यलाई। यसको उदाहरण तपाईंको यो वेब संजाल पनि त हो ।
७ कस्ता पाठकहरुले आफ्नो रचना पढी दिउन जस्तो लाग्छ ? के तपाईंका रचनाहरुले अपेक्षित पाठक भेटेका छन ?
त्यस्तो ‘क्याटोगरी’ छुट्याएकी छैन । यो निश्चय हो सबैले आफ्नो रचना पढ़ी दिउन । अपेक्षित पाठकको हकमा, छन अपेक्षित पाठक जसले मेरो लेखको पृष्ठभूमि बुझेका छन।
८ विदेशको जीवन व्यस्त दिनचर्याको वावजुद साहित्य सिर्जनाको लागि कसरी समय मिलाउनु हुन्छ ?
निश्चित समय हुन्न कहिलेकाहीं मध्यरातमा बिउंझेर त कहिले रेलमा यात्रा गर्दागर्दै टिपोट सुरु हुन्छ
९ आफ्ना कथाहरुमा पात्रचयन कसरी गर्नु हुन्छ ? कस्ता पात्रहरुलाई लिएर कथा लेख्न रुचाउनु हुन्छ ?
पात्रहरु तपाईंजस्तै/म जस्तै / हामी जस्तै र हामीले भोगेका/अनुभव /सुनेका/पढेका हाम्रै वरिपरिका परिद्रिश्य्हरू पनि हुन सक्छन । निर्द्रिष्ट तोकिएका वा मापदंडनको घेरामा बाधिएंका पात्रहरु लिएर लेख्दिन ।
१० काल्पनिक या यथार्थपरक ? कसलाई बढी प्राथमिकता दिनु हुन्छ ?
फेंटासी लेख्दिन । भोगेका/अनुभव /सुनेका/पढेका हाम्रै वरिपरिका परिद्रिश्य्हरूलाई प्राथमिकता भन्दा पनि समेटछु ।
११ आख्यानका सन्दर्भ र बिषयवस्तुहरु कसरी प्राप्त गर्नु हुन्छ, कहाँ खोज्नु हुन्छ ?
सपना देखेपछि मध्यरातमा बिउंझेर त कहिले रेल यात्रा गर्दागर्दै जे, जे देखिन्छ/सुनिन्छ/पढिन्छ सबै सन्दर्भ र श्रोतहरूलाई आधार मानेर लेख्छु । अरुको कीर्तिको अध्ययन अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
१२ कस्ता प्रसंग हरुले यहाँलाई गम्भीर बनाउछन, भावुक भएको बेला के गर्न रुचाउनु हुन्छ ?
गंभीर प्रकृतिको मान्छे परिन अनि भावुक पनि छु जस्तो लाग्दैन ।
१३ कुन समयमा अध्ययन गर्नु हुन्छ ? मन परेका केही पुस्तकहरु ?
निश्चित समय छैन पढ्न तर प्राय: रेल यात्रा गर्दा किनभने रेलयात्रा मेरो दैनिकी हो अनि, राति पढ़छु। मुलुक बाहिर ( लैनसिंह बांग्देल) अलिखित (ध्रुबचन्द्र गौतम), अनिंदो पहाड़संगै (पारिजात) राधा (कृष्ण धराबासी) सम्झन लायक धेरै छन मन परेका पुस्तकहरु ।
१४ स्टेज कि साहित्य .. दुइटामा एउटा रोज्नै परे ?
स्टेज र साहित्य दुबै मेरो हृदयको नजिक छन तर डिप्लोमाटिक नबनि भन्नुपर्दा साहित्य रोज्छु कारण, साहित्यले स्टेज जीवनशैलीलाई अझ परिष्कृत तथा नयाँ क्रान्ति तर्फ लैजान्छ ।
१५ नेपालको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा के भन्नु हुन्छ ? देशको स्थिति कस्तो छ ?
सचेत नेपाली नागरिक भएको हैसियतले नेपालको राजनीति बारे चासो छ तर नेपालको राजनितिक अवस्था यस्तो/उस्तो भनेर टिपण्णी गरिहाल्नु सक्दिन किनभने, नेपालको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा मेरो आफ्नै निजी धारणा छ ।
१६ नेपाली साहित्य कति व्यवसायिक हुन सकेको छ ? साहित्यकारहरुले साहित्यलाइ नै अंगालेर जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ?
नेपाली साहित्य ब्यावसायिक भै सकेको छैन तर हिजोआज सशुल्क कबिता सुन्न जानेदेखि नेपाली पुस्तक प्रदर्शनिमा समेत नेपाली पुस्तकहरु बिक्री हुन थालेको सुखद समाचार संगै धेर/थोर आर्थिक नै होइन तर लेखकीय जोशमा टेवा बढेको छ । रह्यो सवाल, साहित्यकारहरुले सहित्यलाई नै जिविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्था अलिक मुश्किल नै छ, कारण हाम्रो नेपाली बजार सानो मात्रै हैन आजको पुस्ताहरु कतिपय नेपाली पढ्न रुचाउदैनन भने, साहित्यिक पुस्तक पढने कल्चर तथा जमात पनि सानो छ अझ मलाई के लाग्छ भने, नयाँ पाठक वा, नयाँ पुस्ताहरुलाई आर्कषित तुल्याउने लेखन पद्धति अथवा भाषा परिमार्जन गरेका छैनौ की! केवल बौद्धिक बर्गको लागि मात्रै साहित्य हो भने आम जनताले कसरी बुझ्छ्न नेपाली साहित्य ? अनि बजार-बिस्तार बिना ब्यवसायिक कसरी हुन सक्छ नेपाली साहित्य ? साहित्यमा पनि खेमा हुँदो रहेछ । एकाध आफ्ना खेमाकाहरुले प्रचार गरेकै भरमा पुस्तकहरु बिक्री भए मात्रै । अत: साहित्यकारहरुले साहित्यलाइ नै अंगालेर जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्था कसरी हुन्छ त?
१७ यहाँका पेंटिंगहरु पनि भेटेको छु, कथा कविता या चित्रकारिता ..केमा बढी आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्नुहुन्छ ?
बेगल समयमा, बेगल रुचिले आत्मसंतुष्टि दिदो रहेछ ।
१८ अन्त्यमा मैले नसोधेका तर यहाँलाई भन्न मन परेका केही छन कि ?
बिशिष्ट परिएन । रोएर या पिएर लेख्ने दुबै जमातमा पर्दिन। मान्छेहरु नशा पिएपछि ह्यांगोवर भो भन्छन तर ह्यांगओवर पछिको नशा हो मेरो लेखन किनभने, अरुले के भन्छन भनेर लेख्दिन । अन्त्यमा, धेरै धन्यबाद! अन्तर्वार्ताको लागि ।